Chelsea Oo Kula Soo Wareegi Karta Andrea Belotti £ 21.6m Xagaagan'
HomeWararka Ciyaaraha MaantaChelsea oo kula soo wareegi karta Andrea Belotti £ 21.6m xagaagan’
Chelsea oo kula soo wareegi karta Andrea Belotti £ 21.6m xagaagan’
April 8, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Torino ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay ku iibiso Andrea Belotti kaliya € 25m (£ 21.6m) xagaagan.
27 jirkaan ayaa dhaliyay 103 gool 219 kulan oo uu u saftay kooxdiisa Talyaaniga tartamada oo dhan, oo ay ku jiraan 11 gool 27 kulan oo uu ciyaaray xilli ciyaareedkii 2020-21.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa lagu sheegay in Chelsea ay u dhaqaaqi karto saxiixa xiddiga heerka caalami ee dalka Italy inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan haddii ay ku hungoobaan heshiiska ciyaaryahanka Borussia Dortmund ee Erling Braut Haaland .
Qandaraaska Belotti ee haatan waxaa loo maleynayaa inuu ku jiro qandaraaskiisa lagu burburin karo € 100m (£ 86.5m), laakiin heshiisku wuxuu socon doonaa oo keliya ilaa June 2022, taasoo la micno ah in Torino aysan ku jirin xaalad gorgortan adag.
Sida laga soo xigtay Torino Granata , kooxda Serie A ka dhisan ayaa tixgelin doonta dalabyada ku kacaya € 25m (£ 21.6m) suuqa soo socda, taasoo ka dhigeysa inuu ka beddelan yahay Haaland.
Belotti ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inuu diirada u saaran yahay kooxaha Tottenham Hotspur , Everton iyo West Ham United .